March 2, 2007, 7:36 am Filed under: My Opinion တပ်မတော်က ဘယ်သူ့အတွက်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးက လှပါတယ် ။ အဖြေလေးကလည်း လှပါတယ် ။ လုပ်ပုံတွေကတော့ သောက်တလွဲချည်းပဲ .. ။ ကျမက နိုင်ငံရေးလည်း နားမလည်ပါဘူး .. ။ ပညာလည်း မိုးပျံမြေလျိုးမတတ်သေးပါဘူး .. ။ ယနေ့တပ်မတော်ကို ၁၈နှစ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အဘက်ဘက်မှ သေချာလေ့လာသုံးသပ်ပြီး နားလည်ထားတာက
တပ်မတော်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးအတွက်ကမ်းကုန်အောင် ယုတ်မာတဲ့ လူတစ်စုကိုပဲ အလိုမရှိတာပါ ။ လင်းတို့က တပ်မတော်ကို ဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုနေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး ။ တပ်မတော်ထဲမှာ ကောင်းတဲ့လူတွေလည်း ရှိချင်ရှိမှာပါ ။ အဲဒီထဲမှာနေပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် နအဖကို မလိုလားသူတွေလည်း ရှိမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ် ။ အများစုကိုတော့ ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲလို့ပဲ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ် ။ လင်းကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးထဲမှာတော့ တပ်မတော်ကိုဆို၇င် ပြည်သူက အရမ်းလေးစားတဲ့ ၊ နိုင်ငံအတွက် အသက်စွန့်ထားတဲ့ လူစွမ်းကောင်းတွေဆိုပြီး ယုံကြည်လေးစားတဲ့ဘ၀မျိုးကို သိပ်ရောက်ချင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ ခိုလှုံရာ ၊ အားထားရာ ၊ ဆည်းကပ်ရာ တပ်မတော်အဖြစ် တည်ရှိနေစေချင်ပါတယ် .. ။ လက်တွေ့အချိန် အခုမှာတော့ ……………………….. ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသွားပါတယ် “နိုင်ငံတော်တိုးတက်အေးချမ်းသာယာဖို့ဆိုတာ တံတားတွေ ဆောက်နေရုံနဲ့မပြီးဘူး ။ နိုင်ငံတော်အတွက် ဘာတွေလုပ်နေလည်းလို့မေးလိုက်ရင် တံတားတွေ ဆောက်နေတယ်လို့ ပြန်မဖြေပါနဲ့ ။ ပန်းခြံတွေ တံတားတွေ ကျောင်းအသစ်တွေဆောက်လုပ်ပေးနေရုံနဲ့ နိုင်ငံက ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူး ”
ဒီစကားက သွေးထွက်အောင်မှန်ပါတယ် ။ ဘဘတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင် တံတားချည်းဆောက်နေပါတယ် ။ အဲ ခိုင်လားဆိုတော့လည်း အစောကြီးပြိုကျမယ့်ကိန်းပါ ။ မြ၀တီ ၊ မြန်မာ့အသံတွေမှာဆိုရင်လည်း ဘယ်နေ့က ဘယ်တံတားဆောက်တယ်ချည်းပဲ ပြနေတာ ခက်ပါတယ် ။ ပြည်သူတွေ စားစရာမရှိရင် တံတားပဲ ကိုက်စားကြတော့လို့များ ဆိုလိုနေသလား ဘဘတို့ရယ် …….. ။ Like this:Like Loading...
March 3, 2007 @ 6:12 am Reply	သိပ်ဟုတ်တာပေါ့ရှင် …. ပြည်သူတွေ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်မယ့် တပ်မတော်ဖြစ်မယ့်အစား အော့နှလုံးနာစရာဖြစ်နေတာ ရင်နာဖို့သိပ်ကောင်းပါတယ်..
March 3, 2007 @ 8:59 am Reply	Hahahhaa,, LOL,,, That’s True,, Linlat,, You just pointed out what exactly the shit that they are doing….. You just got it right,,girl PLW
March 4, 2007 @ 4:38 am Reply	i am so sad for u . firned linlet when i read ur story about ur past years . now u r studying at singapore better then in past. future time, our country need who will serve for burmese citinzin.” i mean–freely elected governmet by ppl”
ur dearbro \_jimmy
March 9, 2007 @ 7:04 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI